Shororkeessaan Eenyu? – Ayyaantuu
HomeAfaan OromooShororkeessaan Eenyu?
Shororkeessaan eenyu? isa akkamiititu shororkeessadha? Isa walqixxummaaf falmu, isa mirga saba isaaf qabsaawu, isa dimookiraasii dhugaaf dubbatu moo isa biyya namaa weeraree mirga uummamaa fi dimookirsii namaa sarbee saamicha gaggeessu dha? isa dhugaaf dhaabbate moo abbaa irree waraana amma funyaanitti hidhate bobbaasee maaf mirga keessan gaafattan jedhee nama fixuudha? Eenyu shororkeessan? Isa ajjeechaan haa dhaabbatu jedhee dhugaaf falmu moo ? Isa barataa, barsiisaa, daa’amaa guddaa, jaarsaa jaartii karaarratti rashanuudha? Eenyu shororkeessaan isa mirga abbaa biyyummaa isaaf falmu moo? Isa sisaamu malee jedhee ajjeechaa raawwatuudha? Kami shororkeessaan?
Gaafiin kun gaafii wal xaxaa fi wal nama mormisiisuu miti, nama gorora liqimsee mitii daa’imti sabiyyiin kan deebiftuudha. Eeyyee gaafii ifaa fi eenyuuyyuu salphaatti deebisuu danda’uudha. Shororkeessaan isa uummata biyya isaa irratti bahaa gala dhorku, murna ykn mootummaa fedhii uummataa malee humnaan aangoo qabatee isin bulchu malee jedhuudha, Shororkeessaan isa uummata mirga isaaf falmu ajjeesudha.
Gooleessaan isa qabeenya uummataa afaan qawween irra dhaabbatee saamuu fi saamsisuudha. Shorkeessaan isa xiqqaa guddaa, dhiiraa dubartii waraana itti bobbaasee karaarratti ajjeesisuudha, Shorkeessaan isa mirga namaa uukkaamsee nama fixuu fi hidhee dararuudha. Shorkeessaan isa mirga uumaaa fi dimookiraasii namaa uukkaamsuudha. Hiikni shorkeessaa inni beeknuu fi addunyaan irratti walii galu kana. Murnas ta’e mootummaa yakkoota akkanaa saboota irratti rawwatu shororkeessadha. Kanaaf uummanni Oromoos Wayyaaneedhaan shororkeessituudha jedha, kanaaf irrattis qabsaawaa ture, qabsaawaas jira. Wayyaaneen murna uummata Oromoo irratti yakka shororkaa raawwachaa turteedha.
Wayyaaneen shorkeessituudha. Wayyaaneen murna humnaan aangoo qabattee, aango kanarra turuuf ammoo shororkaa raawwachaa jirtuudha. Saboota biyyattii addatti ammoo uummata Oromoo mirga isaaf falamatu irratti yakka raawwachaa turte. Jumlaan ajjeesaa, hidhaa fi dararaa turte, ittis jirti. Wayyaaneen saamaa jiraachuuf jecha yakki uummata Oromoo irratti hin raawwatin hin jiru.
Uummanni Oromoo guyyaa Wayyaaneen aangoo shiraa fi afaan qawweetiin qabatteerraa kaasee akkuma dura dhaabbateetti jira, murna saamichaaf aangoo humanaa fi shiraan qabattee ta’uu waan dursee hubateef kaleessaa amma har’aatti kunoo falmii walirraa hin cinne irratti gaggeessaa jira. FXG dabalatee ilmaan isaa qabsaawoonni/qeerroon qabsoo xumura gabrummaa irratti gaggeessaa jiru. wareegama kaffalmaa tureeniis kunoo uummanni Oromoo injifannoolee cucculuqoo gonfateera.
Murni mootummaa ofiin jettu Wayyaaneen FXG fi qabsoo hidhannoo uummanni Oromoo dhaaba isaa ABO fi ilmaan isaa qeerroo waliin irratti gaggeessu kana dhaamsuuf yaaliin hin taasisiin hin jiru. Ilmaan Oromoo sabboontoota saba isaaniif quuqaman kumootaan hidhaa, kanneen mirga abbaa biyyummaa Oromoof qabsaawan, ajjeesaa fi dararaa turtee jirti. Kanneen eessa buteen isaanii dhabames danuudha. Walumaa galatti haa milkaawuu baatuuf malee wayyaaneen humnaan qabsoo uummanni Oromoo mirga abbaa biyyummaa isaaf taasisu ukkaamsuuf yaaltee jirti.
Haa ta’uutii Uummanni Oromoo addatti ammoo sabboontonni qabsaawoonni qaroon sabaa; mirga Oromoon uumamaan qabuuf falmaa turan , ammas falmaa isaanii caalatti cimsanii falmaa jiru malee akka Wayyaaneen kajeelte qabsoo isaanii hin dhaabne. Maqa balleessiin shororkeessitoota jechuun gaggeessaa turtee fi hidhaa ajjeechaanis duubatti isaan hin deebifne. Saba Oromoo aamamaa jiru, saba Oromoo mirgi isaa cabee dhiitamaa jiruuf caalaatti falmaa jiru.
Wayyaaneen dargaggoota qeerroo, qabsaaoota Oromoo mirga saba isaaniif qabsaawaa turanii fi jiraniin shororkeessitoota jechaa turteetti, hedduus kanaan yakkitee ajjeeftee jirti, mana murtii ishii kan fakkeessiittis dhiheessitee du’aa amma humrii guutuu itti murteessaa turtee jirti. Kanneen eessa buuteen isaanii dhabame, kanneen biyyaa baqachifamanis akkasuma lakkoofsa hin qaban. Har’a garuu uummanni Oromoo of ittisuurraa gama haleellatti cehee jira. Qabsoo mirga abbaa biyyummaa gaggeessaa jiruun Wayyaanee shororkeessaa jira. Kunoo osoo hin jaalatin dirqamtee holola sodaarra madde hololaa jirti.
Dhiphattees akuma argaa fi dhagahaa jirru kanneen hartee hidhaa turte gadi dhiisaa jirti. FXG uummanni Oromoo waggoota hedduuf gaggeessaa ture, qabsoon ABO /qeerroon finiinaa ture firiin muldhacha jira.
Eeyyee uummanni Oromoo wayyaaneen holola sobaa fi sossobaa adda adda gaggeessitus didee fincila itti fufeera. Kunoo lagannaa gabaa, uggura geejjibaa, hojii dhaabuu gaggeessuun sirnicha caalatti dhiphisaa jira.
Wayyaaneen ofii shororkeessituu taatee uummata Oromootiin addatti ilmaan isaatin Shororkeessaa jechaa turte har’a saaxilmatee qaana’aa jirti. Salphachaa jirti, qabsoon Oromoo qullaa isii dhaabaa jira.
Miseensonni dhaaba goleessituu tanaas kanneen OPDO ta’uun tajaajilaa jiran dabalatee yeroon itti addabaabaayi dhugaatti dhihaatanii kan harka isaanii argatan fagoo miti. Shakkii malee qabsoon keenya cimee itti fufnaan dhidhimni Wayyaanee hin oolu.
Akkuma hunduu beekuu fi quba qabuu murni gooleessituun tun fakkeessiif yeroo ammaa kana hidhamtoota hike, tarkaanfii akkanaa fi akkasii fudhachaan jira jechaa jirti.Jaalattee osoo hin ta’in dirqamtee ilmaan sabootaa addatti sabboontoota Oromoo dharaan yakkitee manneen hidhaatti waggootaaf guuraa turte jaalattee osoo hin taane dhiphattee hiikaa jirti. Murni gooleessituun tun osoo du’aa jirtuu maqaaf jira jechuuf namoota dirqamtee hiikaa jirtu kana yoo unka qopheessitee nuti shororkeessitoota turre, ammaan achi itti hin deebinu jedhaatii mootumma kiyyaaf mallatteessaa jechaa jirti. Haa ta’uutiii gama kanaaniis hin milkoofne. hidhamtoonni hunduu shorkeessaan kan mirga uummattootaa sarbee, sabbooontoota hidhaa fi ajjeesaa, dararaa fi saamicha gaggeessaa jiru jechuun harkatti busheessaniiru. Qaanessaniiru. Caalaatti akka dhiphattu taasisaniiru. Jaalttee osoo hin ta’in dirqamtee hidhamtoota muraasa ta’anis hiikuu itti fuftee jirti. Kun ammoo Oromoof injifannoodha, kun ABOf injifannoodha, kun qeerroo bilisumaa Oromoof innifannoodha.
Amma mootummaan faashistiin,murni Shororkeessituun waggoota 26n darbaniif uummata Oromoo goolaa turte dhumafii jira. Guyyaan itti dhidhimtu dhihaachaa jira. Dhaabni sabboontoota haqaaf qabsaawaniin shorkeessitoota jechaa turte sobduu ta’uun, shorkeessaan ishii ta’uun addunyaaf ifa ta’eera. Kun ammoo kufaatii ishii saffisiisaa jira.
Guyyaa kufaatii ishii kana caalaatti saffisiisuu fi dhiheesuuf ammoo qabsoo itti jirru qabsoo roga maraa, FXG ABO/qeerroon durfamu gama maraanuu akka cimu waan nurraa eegamu bahachuu qabna. Amma murni shorkeessituun tun gateettii ummata keenyarraa butuutti qabsoon keenya caalaatti cimuu qab.